Guusha Muuse Suudi oo qabsatay baraha Bulshada | KEYDMEDIA ONLINE
Guusha Muuse Suudi oo qabsatay baraha Bulshada
Guusha Sanatar Muuse Sudi Yalaxow, ee dib ugu laabashada Aqalka sare, ayaa sababtay hadal heyn weyn tan iyo xalay, dalka iyo dibadda, ayaana si weyn looga soo dhaweeyay guusha Xildhibaan Yalaxow.
JOWHAR, Soomaaliya – Tan iyo fiidkii hore ee xalay, hadal heynta ugu badan baraha bulshada ayaa ah guusha uu Senator Muuse Suudi Yalaxoow, ka gaaray doorashadii Aqalka Sare ay ka dhacday xarunta dowlad goboleedka Hirshabeele ee Jowhar.
Guud ahaan dal iyo dibad, ayaa si weyn looga dabaal degay guusha Xaaji Muuse, waxaana qeybo ka mid ah Caasimadda iyo gobollada dalka ka dhacay bannaan-baxyo lagu soo dhaweynayo guusha Yalaxow.
Ujeedka u weyn ee uu xambaarsan yahay dabaaldegga shacabka iyo hambalyada siyaasiyiinta ayaa ah labo arrimood oo isa-saaran, kuwaas oo kala ah;
In Sanatar Muuse Suudi Yalaxow, uu si buuxda u matalay bulshada uu kursigooda ku fadhiyay afartii sano ee la soo dhaafay. (Matalaad rasmi ah).
In uu ka guuleystay Kooxda Farmaajo, oo dadaal xooggan ku bixisay sidii ay Cabdullahi Sheekh Xasan oo Madaxtooyada ku daaban ugu boobi lahaayeen kursiga.
Xaaji Muuse, wuxuu taageero aan caadi ahayn ka heystaa beesha Hawiye, gaar ahaan Abgaal, taas oo uu ku kasbaday dadaalkiisii ku aaddan ka hor-taggii damacii Farmaajo ee muddo kororsiga.
Afartii sano ee tagtay, wuxuu waqtigiisa ugu badan ku bixiyay tilmaamidda tallaabooyinka qaldan oo ay qaadayen kooxda Farmaajo, wuxuuna udub-dhexaad u noqday Ciidamadii Badbaado Qaran ee Farmaajo ku qasbay inuu wajreejo Amniga dalka iyo hoggaanka doorashooyinka.
Muuqaallo, qoraallo iyo wacitaanno, ku aaddan hambalyada guusha Muuse, ayay shacabku is-weydaarsanayaan tan iyo xalay, halka qaar ka mid ah siyaasiyiinta miisaanka culus, ay si weyn uga hadleen in Muuse Suudi, uu mar kale qeyb ka noqdo Aqalka sare.
Tallaabadaan, waxaa laga baran kara in shacabku si togan u garab istaagi doonaan, masuulka u matala sida rasmiga ah, isla-markana ka shaqeeya danta dadka uu kursigooda ku fadhiyo.
Hoos ka aqriso hambalyada qaar ka mid ah Siyaasiyiinta.
MW Xasan Sh Maxamuud - Hambalyo Senator Muuse Suudi Yalaxoow. Waxaan kuu rajeynayaa inaad ku guuleysato mas’uuliyadda ay shacabkaagu kuu idmadeen.
CC Warsame – “Waxaan u hambalyeynayaa Senator Muse Suudi Yalaxow oo mar kale dib loogu doortay Aqalka Sare ee Baarlamaanka. Waxaan u rajaynayaa in Ilaaheey la garab galo xilka”.
Guddoomiye Abshir Bukhaari – “Waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa Senator Muuse Suudi Yalaxow oo markii labaad loo doortay xubinimada Aqalka Sare ee BFS. Senator Muuse Suudi waxa uu ahaa mudo xileedkii Aqalka Sare ee Koobaad, mudane sharfan, oo leh aragti, codkiisa iyo xikmadiisana aan marna looga maarmi karin fadhiyada Aqalka Sare”.
Xildhibaan Mahad alaad – “Hambalyo Al-Xaaji Muuse Suudi Yaxalow. Duqii Badbaado Qaran reer Hirshabelle si sharaf leh ayay ugu abaal gudeen. Madaxweyne Cali Guudlaawe iyo Barlamaanka Hirshabelle waa mahadsanyihiin”.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa - “Waa anoo Al-xaaji Senetor Muuse Suudi meesha wax u marayaan shaashadaha kala socda. Dabaal daggu waa soo dhawayhay”, (Ka hor inta aan lagu dhawaaqin natiijada).
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi – “Xaajiga iyo ushiisii oo dib loogu doortay kursiga 1aad ee aqalka sare ee Barlamaanka Federaalka Soomaaliya. Mahadsnaidiin xildhibaanada Hirshabeelle waxaad gudateen waajibkiina qaran, waxaadna dhowrteen magaca Hirshabeelle. Hambalyo Xaaji Muuse, afar sano oo kale oo xaqqa iyo cadaaladda aad garab istaagi doonto ayaa kuu bilaabatay”.